နိုင်ငံတကာသတင်း Archives - Myitter
March 17, 2020 Myitter 0
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပျောက်ကင်းသည့် ဆေးဝါးနှစ်မျိုး သြစတြေးလျ သုတေသီများက ရှာတွေ့ပြီ ယနေ့အတွက်တော့ တကယ့်ကိုသတင်းကောင်းလေးတစ်ခုကိုဖော်ပြပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ အာုးံးစိုးရိမ်ထိတ်လကြောက် ရွံ့နေရတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို WHOကပါ ကမ္ဘာ့ကရောဂါဆိုကြီးဖြစ် ကြေငြာထားပြီး ကမ္ဘာ့နိုင်းငံပေါင်း (၁၀၀)ကျော်မှာ ရောဂါဖြစ်ပွားသူ သေဆုံးသူ ကူးဆက်ခံရသူတွေနဲ့ ပွက်လောတွေရိုက်နေခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ယနေ့အချိန်ထိ Covid 19 ကိုမတွေ့ရှိရသေးပါဘူး။ […]
သွစတွေးလသြိပ်ပံပညာရှငျတှေ တီထှငျတဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကာကှယျဆေး
သြစတြေးလျသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ သူတို့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးကို တီထွင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဒါကို လူတွေကြားထဲဖြန့်ဝေဖို့အတွက်တော့ လနဲ့ချီပြီး ကြာမြင့်ဦးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သြစတြေးလျနိုင်ငံ Brisbane မြို့ ကွင်းစလန်းတက္ကသိုလ်က သိပ္ပံပညာရှင်သုံးယောက်က COVID-19 ရောဂါကို ကာကွယ်တိုက်ဖျက်နိုင်မယ့် ကာကွယ်ဆေးကို တီထွင်လိုက်နိုင်ပြီလို့ ယုံကြည်နေကြပါတယ်။ “ဗိုင်းရပ်စ်အတွက် တကယ်အလုပ်လုပ်မယ့် ကာကွယ်ဆေးကို ထွင်နိုင်ခဲ့ကြပြီးပြီလို့ ငါတို့ထင်တယ်” […]
အီတလီမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြင့် သေဆုံးမှုများကြောင့် နာရီဝက်တစ်ကြိမ် သင်္ဂြိုလ်နေရ ….
အီတလီနိုင်ငံ ဘာမိုဂါမြို့တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြင့် သေဆုံးမှုများကြောင့် နာရီဝက်တစ်ကြိမ် သင်္ဂြိုလ်နေရ… ဥရောပတိုက်၏ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု ဗဟိုချက်ဖြစ်နေသော အီတလီနိုင်ငံ၌ တစ်ပတ်အတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် လူ ၃၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ပြီး နာရီဝက်တစ်ကြိမ်နှုန်းဖြင့် ရုပ်အလောင်းများကိုသင်္ဂြိုလ်နေရသည်။ လွမ်ဘာဒီဒေသရှိ ဘာဂါမိုဆေးရုံ၌ ရုပ်အလောင်းများပြည့်နေပြီး ချာ့ခ်ျကျောင်းများတွင်လည်း ရုပ်အလောင်းများသင်္ဂြိုလ်ရန် စောင့်ဆိုင်းနေရသည်။ ဥရောပအနှံ့အပြား၌ […]
အီတလီနိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် တစ်ရက်အတွင်း လူ (၂၅၀) စံချိန်တင်သေဆုံး ….
အီတလီနိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် တရက်အတွင်း လူ (၂၅၀) စံချိန်တင်သေဆုံး… အီတလီ၊ မတ်လ (၁၄) ရက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကူးစက်မှုနှင့် သေဆုံးနှုန်း အဆိုးရွားဆုံး ခံစားနေရသည့် အီတလီနိုင်ငံတွင် ယမန်နေ့ မတ်လ (၁၃) တစ်ရက်တည်းတွင် ၂၅၀ ဦး ထပ်မံသေဆုံးမှုသည် ရောဂါစတင် ဖြစ်ပွားချိန်မှစ၍ တစ်ရက်အတွင်း […]
တကမ္ဘာလုံးက အတုယူသင့်တဲ့ SINGAPORE ရဲ့ COVID 19 ကာကွယ်ပုံ အားလုံးပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်
March 13, 2020 Myitter 0
တကမ္ဘာလုံးက အတုယူသင့်တဲ့ SINGAPORE ရဲ့ COVID 19 ကာကွယ်ပုံ အားလုံးပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါတယ် တကမ္ဘာလုံးက အတုယူသင့်တဲ့ Singapore ရဲ့ Covid 19 ကာကွယ်ပုံ Singapore မှာကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် case ဖြစ်တဲ့သူ စုစုပေါင်း ၁၄၃ ရှိသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထဲမှာ တစ်ယောက်မှနိုင်ငံတွင်း […]
လုံဘူရီခရိုင်ရဲ့ လမ်းပေါ်မှာ ရာနဲ့ ချီတဲ့ မျောက်တွေ ပြည့်နက်နေ
👉 ထိုင်းနိုင်ငံက မျောက်အုပ်စုနှစ်ခု တိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံ အများပြားထိတ်လန့် ရာနဲ့ချီတဲ့ မျောက်အုပ်စု နှစ်ခု ထိုင်းနိုင်ံ လုံဘူရီ ခရိုင်မှာ မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့က တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဒေသခံတွေ ထိန့်လန့်ခဲ့ရကြောင်း ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာက ရေးသားခဲ့ပါတယ်… ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ရာ လုံဘူရီခရိုင်ရဲ့ လမ်းပေါ်မှာ ရာနဲ့ […]